Miyay kala fogaadeen iyana Farmaajo iyo Qoor-qoor ? - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Miyay kala fogaadeen iyana Farmaajo iyo Qoor-qoor ?
Madaxwayne Farmaajo, ayaa lagu wadaa in uu faro-madhan iska taago xidhiidh aan xaqiiqo ku dhisnayn, oo uu ka raadinayo madaxda maamul goboleedda oo markii hore aanu badankooda soo dhawaysan jirin, hase ahaatee uu rabo in muraadkiisa uu maanta ku fushado.
Madaxwaynaha, ayaa isku dayaya in uu dhaqaale kusoo jiito madaxda maamul goboleeddada, isaga oo dhinaca kale raba in uu kala qariyo hadba waxa uu kula kala heshiiyo labada garab ee uu ukala jabiyay madaxdii maamullada.
Shirkii Dhuusa-mareeb 3 ee arrimaha doorashooyinka, waxaa qaadacay ka qayb galkiisa iyo qodobadii kasoo baxayba Siciid Cabdillaahi Deni iyo Axmad Madoobe, hase ahaatee Madaxwayne Farmaajo, ayaa maalmo badan kadib waxaa la aaminsanyahay in uu dhaqaale badan u ballan qaaday si uu uga dhaadhiciyo in ay taageeraan doorashada soo socota.
Imaansha Axmad Madoobe iyo Deni ee Muqdisho, ayaa u muuqda in uu kala fogeeyay Qoor-qoor iyo Farmaajo, waxaana wararku sheegayaan in Qoor-qoor, uu diiday dalab uu Farmaajo u gudbiyay oo sheegaya in uu shirka yimaaddo.
Madaxwayne Axmad Cabdi Kaariye (Qoor-qoor), ayaa Arbacdii diyaarad ku dhaafay Muqdisho oo ay ku kulmeen Farmaajo iyo hoggaamiyeyaasha labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland; isaga oo ku wajahan waddanka Djibouti.
Geesta kale, Madaxwayne Geelle oo ay aad ukala fogeedeen Farmaajo markii uu la saftay dawladda Eratria oo colaad guun ah oo aan wali laga heshiin dhex-taallo Djibouti, ayaa casuumay Qoor-qoor taasna, waxaa laga shaki qabaa in ay sii kala fogayso xidhiidhka Farmaajo iyo Qoor-qoor.
4 xaqiiqo, oo muujinaya ciddii maamuli jirtay Soomaaliya 3-dii sanee lasoo dhaafay?
Yaa sugaya amniga Shirka Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada?
Siciid Deni oo furay kalfadhiga 47aad ee Baarlamaanka Puntland